Antenimiera afrikanina: tsy raharaham-panjaka irery ny angovo | NewsMada
Antenimiera afrikanina: tsy raharaham-panjaka irery ny angovo
Namoaka tatitra sy laminasa ny Antenimiera afrikanina momba ny angovo, ny volana novambra lasa teo, hanavaozana ny paikady amin’ny famatsiana herinaratra aty amin’ny tapany atsimon’i Afrika, tafiditra amin’izany i Madagasikara. Inona ny zava-misy ary ahoana ny hiatrehana ny ho avy ? Niainga avy amin’ny fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ny namaritana izany fa tsy raharaham-panjakana irery.
Avy amin’ireo teknisianina amin’ny sehatra tsy miankina ny nanangonam-baovao momba ny angovo : ireo olana samihafa sedrain’ny orinasa. Nozahana ny fiaraha-miasa isam-paritra sy iraisam-pirenena, toy ny famatsiam-bola avy amin’ny Banky iraisam-pirenena ho an’ny angovo.
« Zava-dehibe amin’ny fampandehanana ny orinasa ny angovo, ka mitaky tompon’andraikitra mahavita tsara izany asa izany ho an’ny 10 taona ho avy », hoy ny talen’ny Antenimiera afrikanina momba ny angovo, i Mickaël Vogel. « Hanaovana fanadihadiana lalina koa ny solika sy ny gazy aty amin’ny tapany Atsimon’i Afrika, hizahana famatsiam-bola ».
Haverina isan-taona ny laminasa toy izao hanomezana torohevitra sy ireo mpampiasa vola rehetra mitrandraka ny angovo, tafiditra amin’izany ny herinaratra, ny solika, ary ny gazy. Tokony ho laharam-pahamehana ny momba ireo any amin’ny firenena isanisany, hita manomboka amin’ny tetibolam-panjakana sy politika faritan’ireo vondron’ny mpandraharaha, indrindra ny fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny tsy miankina. Olana iray goavana mbola tsy voavaha, ary vao mainka mihitsoka eto Madagasikara ny angovo amin’ny ankapobeny, indrindra ny famatsiana herinaratra.